By ချိစ် စက်တင်ဘာလ 16, 2021 အစားအသောက်များ, ဝင်ငွေနည်းမိသားစုများအတွက်အခမဲ့အရာများ0မှတ်ချက်
- ယနေ့ကျွန်ုပ်နှင့်နီးသောအခမဲ့အစားအစာ Giveaway
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အချိန်တိုင်းအကူအညီလိုအပ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်အမေရိက၏အစားအစာဘဏ်များအဖွဲ့အစည်းသည်အစားအစာနှင့်အခြားအကူအညီများကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ရရှိရန်ကူညီရန်ဤနေရာတွင်ကူညီသည်။
ဒေသအလိုက်အစာစားချင်စိတ်၏အနှစ်သာရသည်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ Food Safe သည်ဖွံ့ဖြိုးလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရောဂျက်များသည်လူငယ်များ၊ ပို၍ အသက်ကြီးသောလူကြီးများနှင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအပါအ ၀ င်စုရုံးစုဖွဲ့မှု၏အထူးလိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းသည်။
ဒီနေ့ငါ့အနားမှာအခမဲ့အစားအစာ Giveaway အကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာအချက်များ
ဒီနေ့ငါ့အနီးအနားမှာ Free Food Giveaway ကိုမကြည့်ခင်ကျေးဇူးပြုပြီးသတိပြုပါ။ အနီးအနားရှိအစားအစာဘဏ်များနှင့်အခမဲ့အစားအစာသိုလှောင်ရန်နေရာများသည်အကူအညီတောင်းရန်ထူးခြားသောနေရာများဖြစ်သည်။
ထိုဒေသများသည်အခမဲ့အစားအစာများ၊ အစားအစာများ၊ တစ် ဦး ချင်းသန့်ရှင်းရေးအထောက်အပံ့များနှင့်ငွေကြေးမဟုတ်သောအကူအညီများကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ကျော်ဖြတ်လိမ့်မည်။
အကျပ်အတည်းတစ်ခုတွင် (ပြည်နယ်အလိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအခမဲ့အစားအစာသိုလှောင်ခန်း) သည်ကူညီနိုင်သည်။
နှောင်းပိုင်းတွင်တစ်နာရီ ၈.၀၀ ဒေါ်လာဖြင့်ချာတိတ်တစ်ယောက်ကိုခေါ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏မှတ်ချက် သူမ၏ငှားရမ်းခမှာလစဉ် ၆၃၅ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးကလေးထိန်းခသည်တစ်လလျှင် ၁၇၅ ဒေါ်လာနှင့်အသုံးစရိတ်မှာဒေါ်လာ ၁၅၀ ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်လူတစ် ဦး နှစ် ဦး ကိုအမှန်တကယ်အာရုံစိုက်ရန်ကုန်ကျစရိတ်များပြီးနောက်လစဉ်ဒေါ်လာ ၁,၂၂၀ ပေးသည်။
အခြေခံအစားအစာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး/ဓာတ်ငွေ့၊ နေ့လယ်စာနှင့်တိုလီမိုလီများအတွက်တစ်ပတ်လျှင် ၆၅ ဒေါ်လာချန်သည်။ ဤသည်မှာလည်ပတ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်း၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်။
သူတို့ကမင်းမိသားစုကိုတကယ်အာရုံစိုက်ဖို့မလုံလောက်ဘူး၊ တော်တော်များများကအစိုးရအကူအညီရဖို့အများကြီးလုပ်နေကြတယ်။ သင်လိုအပ်သောအခွင့်အလမ်းတွင်အကူအညီရယူရန်ဒေသဆိုင်ရာသိုလှောင်ခန်းတစ်ခုသို့သွားရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည်။
အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာများ ၀ ယ်ယူရန်အကူအညီအစီအစဉ်များ
အောက်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောရိက္ခာသိုလှောင်ရန်နေရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များမရှိသော်လည်းယနေ့မိသားစုများထံအကူအညီတောင်းရန်ကွဲပြားသောနေရာများရှိသည်။ စင်တာတစ်ခုအနေနှင့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကိုလျှော့ချရန်အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးသူများကဲ့သို့ကလေးများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဗဟိုအစိုးရသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောမိသားစုများနည်းတူလစာနည်းသောမရေမတွက်နိုင်သောအကူအညီအစီအစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ပြည်နယ်အသင်းအဖွဲ့များကဲ့သို့ပြည်နယ်မှအကူအညီရနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုနိုင်ငံအနှံ့သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။
၎င်းသည်နိုင်ငံ၏မောင်းနှင်အားအခြေခံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအခြေခံအုတ်မြစ်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအားသူတို့၏ဘာသာရေး၊ လူမျိုး၊ လှုပ်ရှားမှုအဆင့်အတန်းနှင့်အသက်အရွယ်ကိုအနည်းငယ်စိတ် ၀ င်စားသည်။
အခမဲ့အစားအစာဘဏ်များ၊ စွပ်ပြုတ်မီးဖိုချောင်များ၊ အကျပ်အတည်းငွေကြေးအကူအညီနှင့်အခြားစီမံကိန်းများအားဂရုစိုက်ခြင်းသည်အနီးအနားတိုင်းတွင်ရှိသည်။ သူတို့သည်အကာအကွယ်မဲ့သူများ၊ အလုပ်သမားများနှင့်တိုက်ပွဲဝင်မိသားစုများကိုကူညီကြသည်။ ပရိယာယ်များကိုရှာဖွေပါ ကယ်တင်ခြင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားသုံးအခမဲ့အစားအစာဘဏ်များ သင်နှင့်နီးစပ်သည်။
အသင်းအဖွဲ့များ၊ ဥပမာ Gabelli၊ မျှော်လင့်ခြင်း၏ပေါင်မုန့်နှင့်သန့်ရှင်းသောတမန် စားနပ်ရိက္ခာန်ဆောင်မှုများ သာမန်လက်လီစျေးထက် ၄၀% အထိအစားအစာများကိုပေးပါ။
ဤစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုမည်သူ့ကိုမျှလက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ၊ ၎င်းတို့၏လစာကိုအနည်းငယ်သာပေးချေပြီး၎င်းတို့ကိုသုံးရန်အခကြေးငွေမရှိပါ။ ၎င်းသည်မိသားစုများအား၎င်းတို့၏အဓိကငွေတောင်းခံလွှာများပေါ်တွင်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာများစွာစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျိုးနွံသောအစားအစာများကိုပိုမိုစားသုံးပါ။
အဖွဲ့အစည်းများသည် ၀ ယ်သူများကိုသက်တောင့်သက်သာရိုက်နှိပ်နိုင်သောကူပွန်များမှအရေးကြီးသောရင်းနှီးငွေများဖြင့်ပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်။
၎င်းတို့အားအစားအစာနှင့်အစားအစာများအတွက်ငွေပေးချေနိုင်သော်လည်းတစ် ဦး ချင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာများ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အထောက်အပံ့များနှင့်အကျွေးအမွေးများ။
မတူညီသောအခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေသောမိသားစုများသည်အခမဲ့ကူပွန်စျေးနှုန်းများတွင်ဒေတာများကိုပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုသိုလှောင်ခန်းတစ်ခုတွင်အသုံးမချနိုင်သော်လည်းလတ်ဆတ်သောအစားအစာများစွာကိုလည်း၎င်းတို့ သုံး၍ မိသားစုသုံးပစ္စည်းများ ၀ ယ်နိုင်သည်။ အစားအစာဘဏ်များနှင့်ကူပွန်များကိုသုံးခြင်းသည်အလွန်အောင်မြင်သည်။
အမျိုးသမီးကလေးလူငယ်များ - WIC
အခမဲ့သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကလေးချက်ပြုတ်နည်းများ၊ အစားအစာများနှင့်အခြားကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအကူအညီများကိုဘောက်ချာများသို့မဟုတ်ကတ်များကဲ့သို့မကြာခဏရရှိနိုင်သည်။ WIC - Ladies Baby Kids အစီအစဉ်တွင်ပိုမိုလေ့လာပါ။
သန်း ၄၀ ဝန်းကျင်သောအမေရိကန်များသည် SNAP အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံသောဗဟိုအစိုးရမှအစားအစာဘောက်ချာအချို့ကိုရရှိကြသည်။ TANF ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ပေးဆပ်ရန်ကူညီနိုင်ရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဘောက်ချာများသည် ၀ င်ငွေနည်းပြီးအခမဲ့နှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအစားအစာကိုထုတ်နိုင်သည်။ TANF အစားအစာတံဆိပ်ခေါင်းများအကြောင်းပိုမို
ယနေ့ခေတ်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ၊ ဥပမာအခမဲ့လက်ဆောင်များ၊ ကလေးအသုံးအဆောင်များ၊ ဖိနပ်များ၊ ကျောင်းအသုံးအဆောင်များ၊ အလုပ် ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်အခြားအရာများစွာကိုယနေ့ခေတ်တွင်မကြာခဏပေးနိုင်ပါသည်။ အဝတ်အစားဗီရိုများနှင့်လည်ပတ်မှုတို့ကအရာများကိုအခမဲ့ပေးသည်။
ဤဒေသများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အစားအစာမရှိသော်ငြားလည်းဤကွဲပြားခြားနားသောကုန်စည်များကို ၀ ယ်ယူနိုင်ခြင်းသည်မိသားစုများအားအစားအစာ ၀ ယ်ရန်သူတို့၏ငွေကိုဖွင့်ပေးနိုင်သည်။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုဘဏ်များမှပြဋ္ဌာန်းချက်များတင်ခြင်းကိုရှာဖွေပါ။
အမေရိကန်တွေကိုဂရုစိုက်တယ် ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်တစ်ဝှမ်းလုံး၌အစားအစာလက်ဆောင်များအတွက်ရှင်းလင်းရေးအိမ်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့၎င်းသည်နိုင်ငံအတွင်းငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအတွက်အကူအညီအကြီးမားဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းတို့သည်အစားအစာဘဏ် ၂၀၀ ကျော်နှင့်သိုလှောင်ခန်း ၆၀၀၀၀ နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ညစာစားပွဲအစီအစဉ်ရုံးများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်
အပိုင်းများနှင့်ငါးများသည် ၅၀၁ (ဂ) (၃) အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်နှင့်မျှော်လင့်ချက်မဲ့သောလူမှုအသိုက်အဝန်းများအားလေးစားမှုပေးရန်ဖြစ်သည်။
လူငယ် ၄ ယောက်တွင် ၁ ယောက်သည်မြက်ပင်များကိုအမြဲတစေဆာလောင်နေသည်။ အဓိကအရာသည်လူငယ်အနည်းငယ်ကျောင်းတက်ခွင့်ရရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ကလေးဗိုက်ဆာခြင်းမရှိပါ အစားအစာကိုရယူရန်သင်၏အာကာသ၌နေရာအမျိုးမျိုးကိုရှာနိုင်သော 'food map' ရှိသည်။ မင်းရဲ့အနီးအနားမှာအခမဲ့ကျွေးတဲ့ညစာကိုရှာဖွေဖို့မင်းရဲ့စာတိုက်ခရိုင်၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့မြို့နဲ့မြို့ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
အခမဲ့အစားအစာသိုလှောင်ခန်းမှအကျပ်အတည်းအကူအညီအပြင်ညစာစားပွဲများကိုအထူးသဖြင့် Salvation Armed Force ကိုထောက်ပံ့ပေးသောအပိုပစ္စည်းများလည်းရှိသည်။
သူတို့သည်၎င်းတို့အားမျက်နှာချင်းဆိုင်ကျွေးခြင်း၊ အခမဲ့သို့မဟုတ်အေးခဲထားသောအစားအစာများကိုအိမ်ပြန်ပို့ခြင်း၊ ယခုနှစ်အထူးအချိန်များတွင်တစ် ဦး ချင်းကိုကျွေးမွေးခြင်းနှင့်သိသိသာသာပိုလုပ်လိမ့်မည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောသူများ၊ ချို့တဲ့သူများနှင့်ယာယီအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်ရှိသူများသည်သင်နှင့်နီးစပ်သောနေရာအမျိုးမျိုးမှအပူသို့မဟုတ်အအေးကိုအခမဲ့ရနိုင်လိမ့်မည်။ Salvation Armed force soup ဟင်းချက်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုရှာဖွေပါ။
အမေရိကန်အစားအစာဘဏ်များ ၀ ယ်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကဘာလဲ။
OneHarvest သည် ၀ ယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဂိုဏ်းဂဏနှင့်ဘာသာရေးမဟုတ်၊ တစ် ဦး ချင်းစီကိုဖွင့်ပါ။ မည်သူမဆိုအမှတ်အသားကြီးစွာဖြင့်အစားအစာ ၀ ယ်နိုင်သည်။
လတိုင်းသူတို့မှာ menu ရှိတယ်။ မင်းရဲ့ pre-request ကြိုထုပ်ထားတဲ့အသားတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ကွဲပြားတဲ့အစားအစာမျိုးကွဲတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုရယူလိုက်ပါ။
မင်းအနီးအနားက Local Food Bank တွေကဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်နှင့်အနီးအနားရှိအခမဲ့အစားအစာ Giveaway ကိုဒေသခံဘဏ်များကကူညီနိုင်သည်။
သင်၏အနီးအနားရှိအစားအစာဘဏ်များသို့မဟုတ်စွပ်ပြုတ်မီးဖိုသို့ရောင်း ၀ ယ်နိုင်သည်။
မင်းရဲ့မိသားစုကိုဂရုစိုက်ဖို့၊ နေ့တိုင်း ၇ ဒေါ်လာနဲ့အသက်ရှင်ပါ၊ တစ် ဦး ချင်းစီရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ဖို့ SNAP ဘဝ။
မင်းရဲ့လူငယ်တွေကိုအစာမစားဖို့ပြပါ။ (သင်တစ် ဦး ချင်းစီမည်မျှဖြုန်းတီးနေသည်ကိုရိပ်မိရန်လိုအပ်သည်ဟုယူဆပါကမည်သည့်ဘူဖေးကိုမဆိုသွားပါ။ မသက်သာပါ)
သင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါမတိုင်မီအစားအစာအကူအညီကိုသုံးခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ဒုက္ခမျိုးစုံသောအချိန်များတွင်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောလူနေမှုဘ ၀ ကိုကူညီရန်အစိုးရအစီအစဉ်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အနီးရှိယနေ့အခမဲ့အစားအစာ Giveaway တစ်ခုမှပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းကိုယခင်ကတံဆိပ်ခေါင်းများဟုလူသိများသည်။ ယခုအချိန်ထိအမေရိကန် ၇ ယောက်တွင် ၁ ယောက်သည်သွားရန်အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးသည်။
သင်အရည်အချင်းရှိမရှိကြည့်ပါ သင်၏ SNAP အကျိုးကျေးဇူးများကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ပုံကိုတွက်ဆပါ။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျနိုငျပါတယျ မင်းရဲ့အနီးစပ်ဆုံး food bank ရဲ့ application help program နဲ့မင်းကိုဆက်သွယ်ပါ.
သူတို့ကကျောင်းမနေတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကိုအခမဲ့ပျော်ရွှင်စရာညစာနဲ့အဆာပြေတွေပေးတယ်။ သင်၏အနီးဆုံးအစားအစာဘဏ်ကိုဆက်သွယ်ပါ မင်းရဲ့အာကာသမှာညစာစားပွဲတွေရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်ပါ.
WIC (Ladies and Baby Youngsters) အစီအစဉ်များ
သူတို့ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်လစာနည်းတဲ့သူတွေကိုအစိုင်အခဲဖြည့်အစားအစာတွေပေးတယ်။ သင်အရည်အချင်းရှိ၊ မရှိကိုကြည့်ပါ သင်၏ပြည်နယ် WIC အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်သွယ်ပါ လျှောက်ထားရန်။
အစိုးရစီမံကိန်းများသို့ဤတိုးတက်မှုများကိုစူးစမ်းခြင်းသည်သင့်ဘ ၀ အတွက်စိတ်ဆင်းရဲစရာအချိန်၌ဒုက္ခပေးနိုင်သည်။ ငါတို့ကမင်းကိုအရာအားလုံးကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ကူညီဖို့ဒီမှာ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Coronavirus ကာလအတွင်းအစားအစာအကူအညီအစီအစဉ်များအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံမှန်အမေးခံရဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အခမဲ့ ဦး ထုပ်များ
မင်းရဲ့ America care of America အဖွဲ့အစည်းအတွက်မင်းရဲ့လုံခြုံရေးကအဓိကစိုးရိမ်စရာဘဲ။ အဖြစ် coronavirus ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်၊ အစားအစာဘဏ်များ၊ အစားအစာသိုလှောင်ရန်နေရာများနှင့်ဧည့်သည်များ၏လုံခြုံရေးနှင့်သူတို့ကျွေးသောအစားအစာများကိုအာမခံရန်အစီအစဉ်များသည်ပြောင်းလဲနေသည်။
အဆက်အသွယ်ရွေးချယ်မှုနည်းပါးခြင်း (သို့) အဆက်အသွယ်ရွေးချယ်စရာများကိုလက်ရှိသက်ကြီးပိုင်းများ၊ နာရီများ၊ သိုလှောင်ခန်းများ၊ အိမ်ပြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုများ၊ ၎င်းသည်ရေခဲတောင်၏အစွန်အဖျားသာဖြစ်သည်။
စာတိုက်ဘဏ်ရှာဖွေရေးကို သုံး၍ စာတိုက်ခရိုင် (သို့) ပြည်နယ်အလိုက်ရှာဖွေပါ၊ သင်၏ဒေသကိုဆောင်ရွက်ပေးသောအစားအစာဘဏ်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သူတို့ကမင်းကိုအနီးဆုံးအခမဲ့စတိုးဆိုင်များနဲ့မင်းရဲ့အနီးဆုံးပရောဂျက်တွေမှာဒေတာတွေပေးချင်လိမ့်မယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့အနားမှာဒီနေ့ Free Food Giveaway ဆိုတဲ့ဒီဆောင်းပါးအကြောင်းမှတ်ချက်တစ်ခုပေးပါ။ ၎င်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါကသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုအားပြောပြပါ။
Tags:ကျွန်ုပ်အနီးရှိအစားအစာများကိုပေးသောဘုရားကျောင်းများ, ကျွန်ုပ်အနီးရှိစားနပ်ရိက္ခာခန်း, ဒီနေ့ငါ့အနီးအနားမှာအစားအစာလက်ဆောင်, မနက်ဖြန်အစားအစာလက်ဆောင်, ငါ့နားကအခမဲ့ကုန်စုံဆိုင်, ငါဒီနေ့အစားအစာအကူအညီလိုနေတယ်, ကျွန်ုပ်အနီးရှိ mobile food pantry အစီအစဉ် ၂၀၂၀, ကျွန်ုပ်အနီးရှိ mobile food pantry အစီအစဉ် ၂၀၂၀
McDonald's ဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ချိန်မည်သည့်အချိန်၊ ဖွင့်လှစ်သောအချိန်
USA ၏ပြည်နယ် ၅၀ အားလုံး၌သင်အနီးဆုံးအကောင်းဆုံး ၂၄ နာရီစားသောက်ဆိုင်များ
လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်းသို့မဟုတ်တစ်နေကုန်မတ်တပ်ရပ်နေသောသူနာပြုများအတွက်အကောင်းဆုံး Nike ဖိနပ်
အကောင်းဆုံးအမျိုးသားများအတွက်ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးများနှင့်လန်းဆန်းတက်ကြွစေသောအံ့သြဖွယ် antiPerspirant များ
မျက်နှာနှင့်အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံး exfoliators နှင့်၎င်းတို့၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းကျိုးများ
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးသည်းထိတ်ရင်ဖိုနှင့်ကြည့်ရန်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၂၅ ကား